HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Liverpool oo laga soo diiday Dalabkii Federico Chiesa, Heshiis kordhinta Paul Pogba iyo Qodobo kale
July 25, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Kooxda Juventus ayaa diiday dalab dhan 86 milyan oo euro oo ay Liverpool ka soo gudbisay garabka reer Italy ee Federico Chiesa. 23 jirkaan ayaa amaah laba sano ah ugu soo biiray Juventus bishii Oktoobar 2020 ka hor inta uusan si rasmi ah uga dhaqaaqin Fiorentina. (Repubblica)
Arsenal , Tottenham iyo Everton ayaa dhamaantood ka fikiraya inay u dhaqaaqaan weeraryahanka reer Argentina Joaquin Correa, oo 26 jir ah, kaasoo la filayo inuu ka tago Lazio xagaagaan. (Corriere dello Sport)
Manchester United ayaa laga yaabaa inay raadiso inay iska iibiso weeraryahanka reer France Anthony Martial, oo 25 jir ah, iyadoo Tottenham ay xiiseyneyso weeraryahanka reer France. (DailyStar)
Tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Paul Pogba, oo 28 jir ah, inuu sii joogo iyadoo ay xiiseyneyso Paris St-Germain . (Manchester Evening News)
Bayern Munich ayaa xiiseyneysa 25 jirka weerarka uga ciyaara Chelsea Timo Werner, iyadoo maamulihii hore ee RB Leipzig, Julian Nagelsmann, uu haatan maamulo kooxda heysata horyaalka Bundesliga. (Footballinsider247)
Manchester City ayaa qarka u saaran inay laba jibaarto mushaarka daafaca dhexe ee reer Portugal Ruben Dias ka dib markii 24 jirkaan xilli ciyaareedkiisii uu aad u fiicnaa 2020-21. (Xiddig)
Weeraryahanka reer France Antoine Griezmann, oo 30 jir ah ayaa kaliya doonaya inuu ka tago Barcelona hadii uu ku laabto kooxdiisii ​​hore ee Atletico Madrid. (Sport)
Madaxweyne ku xigeenka Juventus Pavel Nedved ayaa sheegay in weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, uu sii joogi doono kooxda. Ronaldo hal sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa kooxda ka dhisan Serie A waxaana lala xiriirinayaa inuu ka tagayo. (Sky Sports Italia)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda PSG iyo xulka Holland Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, ayaa sheegay “in uusan dareemin jacayl” waxaana si gaar ah loogu dhaliilay baraha bulshada kahor inta uusan ka tagin Liverpool bishii June. (Theguardian)
Kabtanka England Harry Kane, oo 27 jir ah, ayaa seegi doona bilowga xilli ciyaareedka Premier League ka dib markii uu soo ciyaaray Koobka Qaramada Yurub. Weeraryahanka Tottenham ayaa doorbiday inuu u dhaqaaqo Manchester City. (Telegraph)
Arsenal ayaa rajeyneysa inay xaqiijiso inay 50 milyan ginni kula soo wareegtay daafaca reer England Ben White, 23, oo ka yimid Brighton ka dib markii uu tijaabada caafimaadka u marayo Isbuucaan. (Dailymail)
Gunners ayaa sidoo kale eegaysa suurtagalnimada ay kula soo saxiixan karto qadka dhexe ee Switzerland Denis Zakaria, 24-jir, kaasoo muujiyay rabitaankiisa inuu ka tago Borussia Monchengladbach . (Mirror)
Crystal Palace ayaa ku dhow inay 20 milyan oo ginni kula soo wareegto daafaca Lyon iyo Denmark Joachim Andersen, oo 25 jir ah, waxayna weli wadahadal kula jirtaa heshiiska Schalke iyo daafaca dhexe ee Turkiga Ozan Kabak, oo 21 jir ah (Mail).
Watford ayaa 15 milyan oo ginni ku dalbatay Adam Armstrong, oo 24 jir ah, iyadoo Blackburn ay ku dooneyso 25 milyan ginni weeraryahankii hore ee England U21. (Thesun)